I-Steatite Grinding Burr ye-Mill Pepper Mill China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > Ingxenye yeCeramic yoMkhumbi Wokupheka > I-Steatite Grinding Burr ye-Mill Pepper Mill
USD 0.12 - 0.2 / Set/Sets
Ukukhiqiza: 2,000,000 sets/month
I-steatite yinto ehlukile futhi ethandwayo yokugaya nge-ceramic burr ku-pepper / isipayisi / usawoti, futhi le-ceramic yobuchwepheshe i-eco-friendly futhi ihambisana ne-FDA, i-LFGB, i-RoHS ngokugcwele.
I-steatite grinder ye-ceramic ifanelana ne-pepper epulasitiki ekhishwayo / usawoti / isikhonkwane ngenxa yendiza ephumelelayo, ikakhulukazi ngesidingo esikhulu kakhulu. Kodwa ukulingana kokulingana akufani nokufana ne-alumina ceramic burrs.
Ngomshini wethu wokukhiqiza ophelele, sisekela isevisi yokufaka ama-prototyping ekukhiqizeni ivolumu ephakeme kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi inqubo yokulinga noma ukunciphisa iphrojekthi yokukhiqiza okuningi. Sikholelwa ukuthi sikwazi ukukunikeza isisombululo esifisa.
● Ukuphika okuphezulu kokugqoka nokuphila kwesikhathi eside sevisi ● Ukuqina kanzima, ubunzima ● Eco-friendly, uhlangabezane ne-FDA, i-EEC, nesidingo se-LFGB.
● Ukumelana namaKhemikhali kanye nokugqwala ● Izindleko ezingaphezulu ziyasebenza kunensimbi yokugaya insimbi
● Ngokuvamile esetshenziswe kupelepele, izipayisi, amatshe okusawoti kanye nezitshalo zemifino / ama-grinders
● Ngokuvamile esetshenziselwa ukugaya ikhofi kagesi kanye neyomshayeli, ikhofi, ikhofi yezinyosi.
Amandla ethu kanye nenzuzo
★ Ukusekela ukulandelela ukukhiqiza ivolumu ephezulu nemishini yokukhiqiza ngaphakathi
★ Ngaphezu kweminyaka engu-14 isipiliyoni sokukhiqiza ochwepheshe sezingxenye ze-ceramic eziphambili
★ Izinhlobo ezingaphezu kuka-50 ezihlukahlukene ze-graming grring burr esizikhiqizile
★ 10+ ukudayiswa okushisayo kanye alumina ejwayelekile, steatite ceramic grinding burr for pepper / spice / usawoti / imifino kilishi
★ Ubunikazi bezobuchwepheshe, i-sales kanye ne-after-sales team, ukusekela izixazululo ezilungiselelwe kakhulu
★ amakhasimende angu-500+ avela emhlabeni wonke futhi aqhubeke nokukhulisa
Q 1: Ingabe ukhiqiza i-graming burr eyenziwe ngezifiso?
A: Yebo, sisekela ukuhlukahluka kwezinsizakalo ezenziwe ngezifiso ze-OEM, i-ODM.
Q 2: Singakwazi yini ukuthola amanye amasampula wokuhlolwa?
A: Yebo, singanikeza amasampula wamahhala wokuhlola kwakho uma ngabe yizinhlobo ezijwayelekile nge-stock.
Q 3: Iyini i-MOQ nesikhathi sokuhola?
A: Uma ingqikithi yokugaya i-ceramic ingokwezihlobo ezijwayelekile, i-MOQ yizingcezu ezingu-1000; Ngakolunye uhlangothi, i-MOQ izoba izingcezu ezingu-5000 uma kuyi-design ekhethekile.
Q 4: Uqinisekisa kanjani ikhwalithi?
A: Sinesistimu yokulawula ikhwalithi eqinile kusuka ekuhlaziyweni kwezinto ezingenayo ekuhloleni kwekhwalithi ephumayo.
Q 5: Iyiphi indlela yokukhokha oyamukelayo?
A: Samukela ukudluliswa kwe-wire, Incwadi yesikweletu, i-Paypal, inyunyana yase-Western, Ikhadi lesikweletu kanye ne-MoneyGram.
Izigaba zomkhiqizo : I-Ceramic Grinding Burr > Ingxenye yeCeramic yoMkhumbi Wokupheka
Gqoka i-Abrasive Stone Grinding
I-Steatite Yokugaya Burr